Xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid oo qarka u saran inuu xabsi ku galo dalkiisa – Gool FM
Horudhac: Chelsea vs Leicester City…(Aar-gudashada ay maanka ku heyso Blues, hardanka booska UCL & koox kale oo faa’ido u aragta natiijada ciyaartan)
(Madrid) 23 Okt 2020. Xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa qarka u saran inuu xabsi ku galo dalkiisa, kaddib markii lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay borotokoolka caafimaad ee Korona Fayras.
Laacibka reer Serbia Luka Jovic wuxuu horumuud u ahaa dhibaatooyin badan oo garoonka banaankiisa ah tan iyo markii uu ku soo biiray Real Madrid xagaagii 2019 isagoo ka yimid kooxda Frankfurt.
Luka Jovic ayaa wuxuu horey ugu careysiiyay dowladda dalkiisa Serbia kaddib markii uu ku soo laabtay iyadoo ay jireen ciyaartoy Real Madrid oo karantiil caafimaad ku jira, intaas kuma uusan ekeyninee wuxuu u soo baxay banaanka si uu ugu dabaal dego dhalashada saaxiibtiis, wuxuuna la kulmay falcelinno rabshad wata oo gaaray heerarka ugu sarreeya ee dowladda Serbia.
Kaddib markii uu ku soo laabtay Madrid, ciyaaryahanka ayaa dhaawac soo gaaray intii uu joogay gurigiisa, waxaana laga saaray kaqeybqaadashada kooxda ka dib markii ay dib u bilowdeen Horyaalka Spain iyo Champions League, kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawaca, ciyaaryahanka ayaa mar kale la go’odoomiyay kaddib markii uu la kulmay mid ka mid ah asxaabtiisa ee qaba caabuqa Korona Fayras, waxaasoo dhan marka laga soot ago wuxuu ka qeyb galay kulamada kooxda Real Madrid daqiiqado kooban Tan iyo markii uu ku soo biiray.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” ee dalka Spain,ciyaaryahan Luka Jovic ayaa haatan wajahaya xiisad cusub, madaama loogu hanjabay lix bilood oo xabsi ah inuu ku gali doono dalkiisa, kaddib markii uu jabiyay borotokoolkii u daganaa caabuqa Korona Fayras bishii March ee la soo dhaafay, markii uu ka soo laabtay Real Madrid.
Sida laga soo xigtay Xeer ilaaliyaha guud ee Serbia, laacibku uma hoggaansamin borotokoolka markii uu ku laabtay Serbia, halka sharciga Serbia uu dhigayo in garsooraha uu ansixiyo eedeynta uga timid Xafiiska Xeer ilaaliyaha Guud, oo mabda’ahaan dhici kara, Jimcaha.
Si kastaba ha ahaatee, Luka Jovic ayaa horay loogu qasbay inuu bixiyo ganaax dhan 30,000 oo euro, taasoo gacan ka geysan karta yareynta ciqaabta la sugayo.
Hakim Ziyech oo cadeeyay waxa uu u baahan yahay Van de Beek si uu ula qabsado Man United